IZA NO TOMPON’NY FANANDROANA MALAGASY ? · L'Homme, son aura et son évolution
> IZA NO TOMPON’NY FANANDROANA MALAGASY ?
Classé dans : — cyrius @ 10:46
Sarin-danitra tamin’ny andro sy ora nahaterahan’Andrianampoinimerina
Taitra ihany ny tena raha nahare fa hametraka daty iray hankalazana ny taom-baovao malagasy ny ministeran’ny kolontsaina.
Avelao ireo tsy mitovy hevitra samy hanazava ny azy, ho azon’ny vahoaka ihany izy mety sy tsy mety any aoriana any, raha tsy izany, ho voasolo zavatra hafa tsy izy ilay kolontsaina.
Nianatra sy nandalina ny fomba malagasy sy ny hafa ny tenanay, anisan’izany ny fanandroana.
Ka asaivo samy hilaza an’izay zavatra hitranga amin’ity taona ity aloha ireo mpifanandrina dia ho hita eo ny tohiny. Miankina amin’ny datin’ny taom-baovao mantsy izay hitranga mandritry ny taona, miteny koa ny ora.
Ireto izao holazaiko ary tsy azon’izy ireo haverina raha mpikaroka tokoa izy.
Mifarana ny 03 jiona fa tsy ny 07 mey na 07 jiona arak’izay voasoratro teo aloha ny fahavaratra raha izay tondroin’ny kintana no arahina.
Hanomboka ny27 novambra izao ny fahavaratra manaraka.
Tsy isika malagasy irery no ahitana tsy fitovian-kevitra eo amin’ny resaka daty, fa misy « logiciel » mandiso kajy koa amin’ity sehatra ity.
Tsy azo tefitefena foana nefa ny daty ara-panandroana satria iankinan’ny fiainana rehetra, na ny fiainam-pirenena na ny fianan’ny tsirairay sy ny fihariany.
Ny 27 novambra vao hanomboka ny fahavaratra, tara iray volana eo ho eo raha oharina tamin’ny fiantombohan’ity fahavaratra ity.
Tsy tokony hisy oram-pahavaratra alohan’io daty io, raha tsy hilaza fitrangana loza voajanahary.
Hitantsika amin’izany fa raha mamafy vary aloha, zatra ny daty mitovy amin’ilay teo ny tantsaha, ho be ny vary simba.
Ka izay no ilazako hoe aza maika hamaritra daty iraisana ny amin’ny datin’ny taom-baovao malagasy.
Tsy hahomby avokoa ny fitapitaka rehetra manomboka amin’ity taona ity, ka mila mitandrina ireo zatra manao laln-dririnina.
Asio fanitsiana koa ireo sokajin’olona hasaina sao handonto an’ilay kolontsaina.
Tsara tsidihana kely ity pejy ity alohan’izay : Ny herin’ny fanahy na hasina
Ny herin’ny fanahy na hasina
Vita ihany koa ny fikarohana momba ny tena vintan’Andrianampoinimerina.
Hita ao koa ny tena antony nahafaty azy.
Mbola ho avy eto koa ny an-dRadama I izay teraka tamin’ny 02 novambra 1791 tamin’ny 10 ora 15 mn alina.
Tsy misy ifandraisany mivantana amin’ny lahatsoratra aloha ity dessin animé amin’ny fiteny malagasy ity :
Hahaliana anao koa ireto pejy ireto :
Mihoatry ny 56 000 no efa nitsidika an’ity tranonkalako ity http://cyrius.unblog.fr/ , Ary maro mpitsidika ireto pejy momba ny fahendrena Malagasy ireto ireto : (Ny herin’ny fanahy na ny hasina)http://cyrius.unblog.fr/?p=1672 – (tantara miafin’i Madagasikara) http://cyrius.unblog.fr/?p=2281 – (Ny fanahy no olona) http://cyrius.unblog.fr/?p=35, ary ao anatin’io pejy io ihany (Ny fanahy faha-7, Zanahary na Aura Atmique) http://cyrius.unblog.fr/?p=1876 – (Leviatana na rivo-doza) http://cyrius.unblog.fr/?p=1589 – (Andrianampoinimerina sy ny vintany) http://cyrius.unblog.fr/?p=1994 Ary tsy azo adino ity pejy iray ity : Le prince de la paix http://cyrius.unblog.fr/?p=1808 . Teny vahiny koa ity pejy ity nefa Fahendrentsika ka araho tsara http://cyrius.unblog.fr/?p=37
Une réponse à “IZA NO TOMPON’NY FANANDROANA MALAGASY ?”
10 mai, 2019 à 10:58
Mety hilaza daty alohan’ireo ny météo, ho fiafaran’ny fahavaratra sy ho fiantombohany amin’ity taona ity, satria raha ny éphémérides vahiny no arahina, efa gémeaux izao, nanomboka tamin’ny 05 mai teo, ary volana novambra no hanomboka ny sagitaire.
Tokony hifanaraka amin’izany koa ny antsika, saingy niampy iray volana ny fahavaratra tamin’ity taona ity, izany hoe mihemotra iray volana avokoa ny daty ara-panandroana aorian’izay.
Hitanao ao amin’ny baiboly ohatra ny hoe « …Izy no mandrotsaka ny oram-pararano ».
Ry zalahy mpijery ny toetr’andro moa géophysicien, izany hoe miompana bebe kokoa amin’ny astronomie fa tsy amin’ny astrologie, na mifandray aza ireo, izany hoe mety hirona amin’ny kajy vitan’ny tandrefana, satria fitaovana avy any, tsy maintsy mifanaraka amin’ny kajy sy praograma avy any.
Ity taona ity ihany moa no hafa ny antsika sy ny an’ny vahiny, fa ho hitanao fa mifarana miaraka amin’ny volana taureau hatrany ny fahavaratra ary miantomboka indray izy amin’ny fiantombohan’ny sagitaire.
Hamafisiko ihany nefa fa 03 jiona vao mifarana ny fahavaratra, tsy vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro io, fa raha tsy izay, dia vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro tokoa.
Afaka miomana ny amin’izay ho setrin’izany isika.
Averiko ihany fa tsara ny manaraka an’ity pejy ity, alohan’ny fandraisana ny fanapahan-kevitra rehetra, raha fomban-drazana sy kolontsaina no resahina : [url=http://cyrius.unblog.fr/?p=1672]ny herin’ny fanahy na hasina[/url]
[url=http://cyrius.unblog.fr/?p=1672]ny herin’ny fanahy na hasina[/url]
Iniako tsy ampiasaina ny voambolana malagasy tsy hilazan’ny sasany hoe manaraka ny atsy aho na ny aroa.